Fantaro i Lucy Chinyeaka Iwuala, mpikatroka fiteny indizeny Igbo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2022 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Italiano, عربي, English
Sary nomen'i Lucy Chinyeaka Iwuala ary nahazoana alalana.
Ao anatin'ny andian-dahatsoratra mitohy manasongadina ny asan'ireo mpikatroka mampiroborobo ny fiteny Afrikana amin'ny habaka nomerika, tianay hasongadina i Lucy Chinyeaka Iwuala (@LucyIwuala) avy any Nizeria.
Miteny Igbo i Lucy, fiteny ampiasain'ny mpiteny miisa 30 tapitrisa eo ho eo ho fiteniny voalohany na faharoa any Nizeria sy any amin'ny faritra hafa any Afrika Andrefana. Nifantoka tamin'ny fizarana fahalalana tamin'ny alalan'ny tetikasa Wikimedia ny ankamaroan'ny asany, amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Vondrona Mpisera Igbo Wikimedian.
Rising Voices (RV): Mba lazao anay ny momba anao azafady.
Lucy Chinyeaka Iwuala (LCI): Lucy Chinyeaka Iwuala no anarako. Mpikatroka fiteny nomerika aho / mpandika teny / tonian-dahatsoratra / mpilatsaka an-tsitrapo, manana mari-pahaizana momba ny fiteny (fikasana).
Amin'ny maha-mpikatroka fiteny ahy, tiako ny mandray anjara amin'ny anjarako (na kely toy inona aza) amin'ny famadihana ho nomerika ireo fiteny indizeny isankarazany. Tamin'ity tolotra ity, nandray anjara ho mpilatsaka an-tsitrapo aho tamin'ny lahatsoratra momba ny fahasalamana Translate-a-thon and Edit-a-thon amin'ny fiteny eo an-toerana tao anatin’ny Tetikasa Hackathon Audiopedia nokarakarain'ny RAIDAID NIGERIA.
Anisan’ny mpandray anjara sady mpanentana tamin'ny hetsika Translate-a-thon sy Edit-a-thon ihany koa aho ho an’ny Vondrona Mpisera Igbo Wikimedians, endriny iray amin'ny Orina Mpanasoa Wikimedia
Nandray anjara ho mpilatsaka an-tsitrapo aho tamin'ny hetsika Edit-a-thon natao tamin'ny 9 Febroary 2022 tao amin'ny Oniversiten'i Nizeria, Nsukka ary nanentana ny fanokafana ny Igbo Wiki Fan Club, Alvan natao tamin'ny 5 martsa 2022.
RV: Manao ahoana ny toetry ny fiteninao amin'izao fotoana izao na anjotra na ivelanjotra?
LCI: Tsy hilaza aho hoe eo amin'ny faratampony na lany tamingana ny teny Igbo, fa holazaiko kosa fa eo amin'ny dingan'ny fahaterahana indray izy io, noho ny fikatsahana ny fanaovana ho nomerika ireo fiteny indizeny isankarazany. Amin'ity fivoarana vao haingana nataon'ireo mpikatroka teny ity, mino aho fa mbola misy fanantenana ho an'ny fiteniko, na anjotra izany na ivelan-jotra.
Inona no antony manosika anao hahita ny fiteninao amin'ny sehatra nomerika?
LCI: Raha ny tahan'ireo fiteny indizeny maro hitako manonja amin'ny sehatra ara-toekarena isankarazany (na eo amin'ny sehatry ny fialamboly na ny fahasalamana), dia manomboka mieritreritra indray aho ary manontany tena hoe, nahoana no tsy hanana soa fanararaotra toy izany ny fiteniko? Rehefa mijery Sarimihetsika Shinoa, Koreana, Indiana isika dia mahita azy ireo mampiroborobo ny fiteniny amin'ny fampiasana ny fiteniny ao anatin’ilay sarimihetsika tsy misy dikantsoratra. Nandritra ny taona maro, mahita namana sahirana miteny Koreana aho, nahoana? Satria nijery azy ireo miteny toy izany tamin'ny sarimihetsika izy ireo. Maro ny ohatra mandrisika ahy isan'andro.
RV: Soritsorito ny sasany amin'ireo fanamby manakana ny fiteninao tsy ho azo ampiasaina anjotra manontolo.
LCI: Ity fahatsapana fahambaniantena amin’ny fiteny iray mihoatra amin'ny fiteny hafa ity. Mitirintirina ambony no fahitana ny teny anglisy raha miafina ambany kosa ny fiteniko indizeny. Raha dinihina anefa, iza no nampiditra an'io fitsarana an-tendrony mitongilana io? Ary izany no nahatonga ny ray aman-dreny sasany hanery ny zanany ho vonton'ny voalohany manoloana ny farany, amin'ny fiheverana fa izany no vavahadin'ny faharanitan-tsaina sy ho kinga ho an'ny zanany ary izany ankehitriny no mahatonga ireo tanora tsy miraharaha ny fiteniny indizeny. Mody tsy mahalala ireo sasany mahay miteny ny fiteniny indizeny mba tsy heverina ho donto na tsy maharaka toetr’andro.
RV: Inona no dingana mivaingana araka ny hevitrao azo atao mba handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteniny na hampiasa ny fiteniny hatrany?
LCI: Manao izay hahazoana antoka fa tsy maintsy atao ny fampianarana sy ny fianarana ny fiteny indizeny isankarazany; manomboka any amin’ny sekoly fanabeazana fototra ka hatrany amin’ny oniversite. Mikarakara fifaninanana teny indizeny, atrikasa, fanentanana misy loka ho an'ny tanora. Ary koa, fifaninanana/hetsika amin’ny samy fiteny indizeny anasana ireo mpitsara efa nahazo fanofanana sy fahalalana momba ireo fiteny ireo.